Praiminisitra Ntsay Christian : “laharam-pahamehana ny fifidianana” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian : “laharam-pahamehana ny fifidianana”
Vita ny famindram-pahefana. Eo am-pandrafetana ny governemantan’ny marimaritra iraisana tarihiny ny Praiminisitra Ntsay Christian. Laharam-pahamehana ny fifidianana.
“Raha ny laharam-pahamehana, ny fanomanantsika ny fifidianana ao anatin’ny fahalalahana. Mba ho fifidianana madio sy mangarahara. Ny zava-dehibe: mila fomba fitantanana vaovao; mila fiaraha-miasa mety hanatsara bebe kokoa ny fanohizana ny ezaka, indrindra ny fahazoantsika vokatra ao anatin’ny fotoana fohy.”
Anisan’ny voalohan-tenin’ny Praiminisitra Ntsay Christian io, tamin’ny nandraisany fahefana eny Mahazoarivo, omaly. Mitaky fitoniana ny fitadiavam-bahaolana amin’izao zava-misy izao. Mandeha amin’izany lalana izany ny ezaka ataony. Vonona hifampiresaka amin’ny rehetra izy. Tsy vita izany, raha tsy misy ny fomba fijery mifantoka kokoa amin’ny tombontsoam-pirenena.
“Matoa nandray fanapahan-kevitra amin’izao fandraisana andraikitra izao ny tenako: mba hananantsika fifidianana madio, malalaka, mangarahara”, hoy izy. Miankina amin’ny fahitana ny ambaindain’ny rafitra rehetra ao anatin’izay ny datim-pifidianana, mifanaraka amin’ny didy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) sy ny lalàna.
Governemanta marimaritra iraisana no hajoro
Avy amin’ny HCC ny didy sy ny fanapahana nametraka fa praiminisitry ny marimaritra iraisana. “Lalana iray koa hametrahana ny governemanta izany marimaritra iraisana izany”, hoy izy, momba ny fananganana ny governemanta. Antsoiny ny vahoaka malagasy mba hampanjaka ny fifankatiavana, ny fahaizana miara-monina, ny firaisankina.
Nisy ny fanomezan-tanan’ny vahiny
Nisaorany ny filoha Rajaonarimampianina nanendry azy ho praiminisitra. Toy izany koa ny filohan’ny Tetezamita teo aloha sady filoha mpanorina ny Mapar, Rajoelina Andry, nanolotra azy. Ankasitrahany ireo tomponandraikitra politika rehetra amin’ny fahatsiarovan-tena, mba hahazoana miroso amin’ny fifidianana malalaka, madio, mangarahara.
Nisaorany manokana ireo mpiara-miombon’antoka, nanome ary mbola manome tanana antsika Malagasy. “Mampitraka antsika izany“, hoy izy. Tsy vita izany raha tsy eo ny fifandraisana akaiky, nefa ao anatin’ny fanajana ny maha firenena ny firenentsika.
Fitanisana ny zava-bita, tao anatin’ny roa taona mahery nitondrany, no nataon’ny Praiminisitra teo aloha, i Mahalafy Solonandrasana.
Maro ny nanome voninahitra izany: nisy mpikamban’ny governemanta teo aloha, ny mpitarika antoko politika, ny masoivoho vahiny…
Tena hisy amin’izay ny hoe fanovana?